အင်တာနက်စွဲခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
Aviv Weinstein, Ph.D ဘွဲ့ကို နဲ့ Michel Lejoyeux, Ph.D ဘွဲ့ကို,
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, အစောပိုင်းအွန်လိုင်း: 1-7, 2010
ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှု, ဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်း, ချို့ယွင်းသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအကြောင်း, အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ညံ့ဖျင်းထိန်းချုပ်ထားအတွက်အဆက်မပြတ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကတိုကျတှနျးသို့မဟုတ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအခြေအနေလူကြိုက်များမီဒီယာများနှင့်သုတေသီများအကြားတိုးပွားလာအာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်, ဤအာရုံကိုကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အင်တာနက် (1) တွင်တိုးတက်မှု paralleled သိရသည်။ အလွန်အကျွံဂိမ်းကစားခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျး (ဘာ), နှင့် e-mail ကို / text messaging: ဖြစ်စဉ်အနည်းဆုံးသုံးမျိုးကွဲဖြစ်အဲဒီမှာပေါ်လာပါသည်။
ဒါဟာအင်တာနက်စွဲများသောအားဖြင့်တစ်ဦးနောက်ခံရောဂါတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုကိုယ်စားပြု, ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ် discrete ရောဂါ entity ရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ မြောက်မြားစွာ comorbid အခြေအနေများ၏ဆက်စပ်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏မကြာခဏအသွင်အပြင်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်၏ရှုပ်ထွေးသောမေးခွန်းထုတ်။ ဒါဟာဟုတ်ပါတယ်, ဟောကိန်း, ယာယီတည်ငြိမ်မှု, နှင့်ကုသမှုကိုတုံ့ပြန် ပတ်သက်. ကန့်သတ်မရရှိနိုင်ပါဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီး, တက discrete ရောဂါတစ်ခုအဖြစ်အင်တာနက်စွဲစဉ်းစားရန်အချိန်မတန်မီပုံပေါ်သော (5) စောဒကတက်ခဲ့သည်။ သို့သော်သုတေသနပြုကြီးထွားလာအင်တာနက်စွဲနှင့်အတူအချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းသိသိသာသာအန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကုသမှုထိုက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်လေ့လာမှုများကဤအငြင်းပွားစရာများအခြေချရန်လိုအပ်သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုသော့ချက်စကားလုံးရောဂါ၏အကြောင်းအရာများကျော် "အင်တာနက်စွဲ" phenomenology, ရောဂါနှင့်ကုသမှုကို အသုံးပြု. Medline နှင့် PubMed အတွက် 2000 နှင့် 2009 အကြားထုတ်ဝေဆောင်းပါးတွေကိုရှာဖွေ။
Diagnosis AND ပျံ့နှံ့နေတဲ့
အင်တာနက်စွဲ (မှီခို) ၏ရောဂါပြဿနာဖြစ်နေဆဲပင်။ ဒါဟာ DSM-IV အပါအဝင်မည်သည့်အရာရှိတဦးကအဖြေရှာတဲ့စနစ်, ပေါ်လာဘူး, ကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောရောဂါရှာဖွေစံမျှရှိပါသည်။လေးအစိတ်အပိုင်းများရောဂါ (6) ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဖြစ်အကြံပြုထားသည်: မကြာခဏအချိန်သို့မဟုတ်အခြေခံ drives တွေကိုတစ်လျစ်လျူရှု၏အသိတစ်ခုအရှုံးနဲ့ဆက်စပ် 1) အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်, 2) အမျက်ဒေါသ၏ခံစားချက်များကိုအပါအဝင်ရုပ်သိမ်းရေး, တင်းမာမှုနှင့် / သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာလက်လှမ်းမမှီနိုင်သည့်အခါစိတ်ကျရောဂါ, 3) ကပိုကောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်လိုအပ်ချက်ပိုမိုဆော့ဖ်ဝဲ, သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုပိုမိုနာရီအပါအဝင်သည်းခံစိတ်, နှင့် 4) ငြင်းခုံအပါအဝင်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ, လဲလျောင်း, ဆင်းရဲသောကျောင်းသို့မဟုတ်အသက်မွေးမှုအောင်မြင်မှု, လူမှုရေးအထီးကျန်နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်.
နိုင်ငံပေါင်းဖြတ်ပြီးလုံလောက်သောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုပြသသောအင်တာနက်စွဲအဘို့အဘယ်သူမျှမအဖြေရှာတဲ့တူရိယာလက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောရောဂါရှာဖွေတူရိယာ၏မကြာသေးမီကစနစ်တကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယခင်လေ့လာမှုများအင်တာနက်ကိုစွဲသတ်မှတ်မှကိုက်ညီမှုစံအသုံးပြုသွားမည်တွေ့ရှိခဲ့လေးနက်နမူနာဘက်လိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါစုဆောင်းရေးနည်းလမ်းများအသုံးချနှင့်မဟုတ်ဘဲအသင်းအဖွဲ့များ၏ဒီဂရီစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မဟုတ်ဘဲ confirmatory data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းစနစ်ထက်အဓိကအားရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်ကို အသုံးပြု. data တွေကိုလေ့လာ variable တွေကို (7) အကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးထက်။ ထို့ကြောင့်ပျံ့နှံ့ ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအပေါ်ဒေတာရောဂါနှင့်ရောဂါရှာဖွေတူရိယာများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရည်အတိုင်းအတာများအခက်အခဲများအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားရှိပါသည်။ ဒါဟာခက်ခဲနိုင်ငံများတလွှားပျံ့နှံ့မှုနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဖို့စေသည်။
သင်တန်းသားများကိုအမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းများကိုနားလည်သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်ပစ္စည်းများအဓိပ္ပာယ်လွဲမှားပြီးရေးသားမပြုစေခြင်းငှါ, မရိုးမသားအဖြေတွေကိုရှိခြင်း, Self-အစီရင်ခံစာများကို အသုံးပြု. နှင့်ဆက်စပ်သောယေဘုယျစိုးရိမ်ပူပန်မှုများလည်းရှိပါသည်။ ထို့အပြင်က်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများနှင့်မျှမလုံလောက်သောထိန်းချုပ်မှု group မှရရှိသောပါဝင်သူရေကူးကန်နှင့်အတူရွေးချယ်ရေးဘက်လိုက်မှု၏ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက Web page များအသုံးပြုမှုကြောင့်လူအဖြစ်ရရှိခဲ့တရားဝင်တုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်တုံ့ပြန်ပုံကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးတည်းလျှောက်လွှာပေမယ့်မဟုတ်အခြားသူတွေဆီသို့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုပြသလိမ့်မည်။
ဒီလေ့လာမှုတွေနှင့်အတူအဓိကအခက်အခဲသူတို့ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးသတ်မှတ်သို့မဟုတ်ဆေးခန်းအတည်ပြုကြသည်မဟုတ်ထားတဲ့ "စွဲလမ်း" "နယ်စပ်ဒေသ," "" အန္တရာယ်မှာ "", အလွန်အကျွံနှင့်အမျှ, အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြရန်မရေဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုသည်။ အင်တာနက်စွဲခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းတခြားနေရာ (12, 36) ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
လူနာနမူနာအပေါ် cross-section လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်, (generalized စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအပါအဝင်) စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) အဖြစ်စိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုစွဲမြင့်မား comorbidity သတင်းပို့ပါ။ အွန်လိုင်းစလူမှုရေးအပြန်အလှန်များအတွက်အထီးကျန်နှင့် preference ကိုကြားဆက်ဆံရေး spurious နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်သည့်သဖွငျ့ variable ကိုကြောင်းကြောင်း (37) အကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
NEUROBIOLOGY နှင့်ဦးနှောက် Images
လက်ရှိတွင် အင်တာနက်စွဲ၏ neurobiology အပေါ်အလွန်နည်းပါးလေ့လာမှုများရှိခဲ့ပါပြီ။ ကွန်ပျူတာနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းအပေါ်အစီရင်ခံလေ့လာမှုများ (တခြားနေရာဤစာစောင်တွင် Weinstein, ကိုကြည့်ပါ) ရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (13) တွေထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လျှက်နေစဉ်ဂိမ်းကစားရုပ်ပုံများနှင့်တွဲ mosaic ရုပ်ပုံများနှင့်အတူတင်ဆက်သူအွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့်အတူ 10 သင်တန်းသားများကိုအစီရင်ခံထားသည်။ အဆိုပါစွဲအုပ်စု, ညာ orbito-တိုကျရိုကျ cortex ညာဘက်နျူကလိယ accumbens နှစ်နိုင်ငံ anterior cingulate နှင့်တိုကျရိုကျ cortex ညာဘက် dorsolateral prefrontal cortex နှင့်ညာဘက် caudate နျူကလိယ medial ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုမတူဘဲ activated ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဒေသများတွင်-of အကျိုးစီးပွားများ၏ activation (Roi) အပြုသဘောပုံအားဖြင့်တော်ကိုနှိုးဆော်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံ Self-အစီရင်ခံဂိမ်းကစားတတ်ပြီးနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ရလဒ်အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်းအတွက် cue-သွေးဆောင်ဂိမ်းကစားတတ်ပြီး / တဏှာ၏အာရုံကြောအလွှာဟာပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက် cue-သွေးဆောင်တဏှာ၏ဆင်တူခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, ရလဒ်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုတွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့်တဏှာအတွက်ဂိမ်းကစားတတ်ပြီး / တဏှာအတူတူ neurobiological ယန္တရား share အံ့သောငှါအကြံပြုသည်။
အင်တာနက်မှီခိုသောဤအကျပ်အတည်းများ၏အောင်မြင်သော resolution ကိုရောင်ပြန်ဟပ်, ဤအကျပ်အတည်းများ (48) ၏မအောင်မြင် resolution ကိုထင်ဟပ်သောအစီအမံအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူကြောင်းအများဆုံးအစီအမံအပေါ်သိသိသာသာနိမ့်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
compulsive ကျဘာအတွက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, တတ်နိုင်, နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (49) ၏အမည်ဝှက်မှလုယူရာဥစ္စာလဲသေကြပြီသူအများအပြားယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့အင်တာနက်စွဲတစ်ခုသိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည်။ အခြားအ compulsive အသုံးပြုသူများကိုနောက်ခံစိတ်ဒဏ်ရာ, စိတ်ကျရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်းရှိစဉ်အခါတချို့ကလူနာကြောင့်ဓာတ်သို့မဟုတ်မတော်တဆအေးစက်အတွေ့အကြုံများမှ compulsive ကျဘာပြဿနာတွေဖွံ့ဖြိုး။ ဘာပြဿနာများနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့ maladaptive ဖြေရှင်း, အေးစက်အပြုအမူ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုစိတ်ဒဏ်ရာ, ပိုးပန်းရောဂါ, ရငျးနှီးကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူ (49) ၏ dissociative ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းပြ။ အဆိုပါပြဿနာသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအဖွဲ့ ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်, nonproblematic ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအုပ်စုတစုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းကိုရှာခြင်းနှင့် JTCI ၏ကိုယ်ပိုင် TRANSCEND profile များကိုအတွင်းရှိကိုယ်ပိုင်ညွှန်ကြားနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု profile များကိုအဆင့်မြင့်ရမှတ်များနှင့်အောက်ပိုင်းရမှတ်များပြသခဲ့တယ်။
ဤရွေ့ကား maladaptive ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူထပ်တူ (ဒီပြဿနာထဲမှာတခြားနေရာ Thibaut ကိုကြည့်ပါ) ပုံရသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအင်တာနက်များ၏တိကျသောသတင်းမီဒီယာကို အသုံးပြု. ရသည်။ compulsive ကျဘာ၏အမှု၌, display ရဲ့အကြောင်းအရာ, ပိုမိုအထူးညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ပျူတာ-ကူညီအပြုအမူစွဲတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ကုသစွဲလမ်းအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်စံပြဿနာများနှင့်အတူ, ဒီလှုပ်ရှားမှုစွဲလူနာတစ်ဦးကြီးထွားလာအရေအတွက်, အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှစ်ဦးစလုံး၏ပုံစံကိုသတင်းပို့.
အင်တာနက်စွဲ, ဆိုလိုသည်မှာ, ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရရှိလာတဲ့နှင့်အတူအင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း, DSM-IV အပါအဝင်မည်သည့်အရာရှိတဦးကအဖြေရှာတဲ့စနစ်, ပေါ်လာပါဘူး။ block အင်တာနက်စွဲကြောင်း DSM-V ကို (5) တွင်တန်ရာပါဝင်ဘုံရောဂါကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့သည်။ သဘောတရား, ထိုရောဂါအွန်လိုင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကပါဝငျတဲ့ compulsive-ထကြွလွယ်သောရောင်စဉ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးသုံးမျိုးကွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ: အလွန်အကျွံဂိမ်းကစားခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျး, နှင့် e-mail ကို / စာသားမမက်ဆေ့ခ်ျပို့။ ကွန်ပျူတာအခါမကြာခဏအမျက်ဒေါသ, တင်းမာမှုနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ၏ခံစားချက်များကိုအပါအဝင်အချိန်သို့မဟုတ်အခြေခံ drives တွေကိုတစ်လျစ်လျူရှု, 1) ရုပ်သိမ်းရေး၏အသိတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်, 2) အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှု: အမျိုးကွဲအားလုံးအောက်ပါလေးခုအစိတ်အပိုင်းများကိုဝေမျှ ပိုကောင်းကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်လိုအပ်ချက်ပိုမိုဆော့ဖ်ဝဲ, သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုပိုမိုနာရီ, နှင့် 3) ငြင်းခုံအပါအဝင်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ, ဆင်းရဲသားကိုအောင်မြင်မှု, လူမှုရေးအထီးကျန်နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လဲလျောင်းအပါအဝင်တပိုင်တနိုင်, 4) သည်းခံစိတ်။ အခြားသူများကအင်တာနက်စွဲနေတဲ့စစ်မှန်တဲ့စွဲမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, ADHD သို့မဟုတ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန် (70) အဖြစ်အခြားတည်ဆဲမမှန်တစ်လက္ခဏာထက်မပိုစေခြင်းငှါစောဒကတက်ကြသည်။ Little က data ကိုဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းမရရှိနိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အင်တာနက်စွဲအခြေခံသည့် pathophysiological ယန္တရားများမသိသောရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ဆွေမျိုးအဝိဇ္ဇာကိုလည်းကုသမှုကိုတိုးချဲ့။ အင်တာနက်စွဲများအတွက်အနည်းငယ်ထုတ်ဝေကုသမှုလေ့လာမှုများပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုကြားဝင်နှင့်မဟာဗျူဟာအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ထို့ကြောင့်ကအင်တာနက်စွဲမဆိုသက်သေအထောက်အထား-based ကုသမှုအကြံပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
နောက်ခံသမိုင်း: ပြဿနာကအင်တာနက်စွဲလမ်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ချို့ယွင်းသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းအင်တာနက်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ညံ့ဖျင်းထိန်းချုပ်ထားအတွက်အဆက်မပြတ်, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်စွဲလမ်းမမှန်များ၏ရောင်စဉ်အတွင်းအင်တာနက်စွဲလမ်းမရှိအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ထို့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမသက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါလည်းမရှိ။ ဒါဟာသို့သော်အဆိုပါ Diagnostic ၏နောက်လာမည့်ဗားရှင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ (DSM) ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲထဲမှာပါဝင်ဘို့အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Objective: ရောဂါ, phenomenology, ရောဂါနှင့်ကုသမှု၏အကြောင်းအရာများကျော်အင်တာနက်စွဲအပေါ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့။
နည်းလမ်းများ: ဟူသောဝေါဟာရကို "အင်တာနက်စွဲသုံးပြီး Medline နှင့် PubMed အတွက် 2000-2009 အကြားထုတ်ဝေစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။
ရလဒ်များ: ရောဂါအတွက်အသုံးပြုသည့်ရောဂါရှာဖွေစံများနှင့်အကဲဖြတ်မေးခွန်းနိုင်ငံများအကြားကွဲပြားခြားနားပေမယ့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဥရောပထဲမှာစစ်တမ်းများ, 1.5% နှင့် 8.2% အကြားပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုညွှန်ပြကြသည်။ လူနာနမူနာအပေါ် cross-section လေ့လာမှုများစိတ်ရောဂါမမှန်, အထူးသဖြင့်ထိခိုက်စေ (စိတ်ကျရောဂါအပါအဝင်) မမှန်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်ပုံမမှန် (ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ) နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) နဲ့အင်တာနက်စွဲမြင့်မား comorbidity သတင်းပို့ပါ။ အများအပြားအချက်များကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, မိဘအုပ်ထိန်းနှင့်မိသားစုအချက်များ, အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအပါအဝင်ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။
သုံးသပ်ချက်နှင့်သိပ္ပံသိသိသာသာ: အင်တာနက်စွဲတစ်ဦးချင်းစီအခက်အခဲအစစ်အမှန်ဘဝ၌မိမိတို့အလွန်အကျွံအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုနှိပ်ကွပ်ရှိပေမယ့်, နည်းနည်းအင်တာနက်စွဲများအတွက်တာဝန်ရှိ patho-ဇီဝကမ္မနှင့်သိမြင်မှုယန္တရားနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ကြောင့်အတိုင်းအတာများလုံလောက်စွာသုတေသန၏မရှိခြင်းကြောင့်အင်တာနက်စွဲမဆိုသက်သေအထောက်အထား-based ကုသမှုအကြံပြုဖို့လက်ရှိမဖြစ်နိုင်ဘူး။
အင်တာနက်စွဲခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအင်တာနက် - အင်တာနက်ပေါ်တွင်စိတ္တဇ